Wasiir isku casilay fadeexad ka dhalatay amar laga soo saarey xayawaan
Wasiir isu casilay amar fadeexad sababay oo laga soo saarey xayawaan
Xisbiyadda mucaaradka ayaan ku qancin talaabadan iyagoo codsaday baaritaano.
COPENHAGEN, Denmark – Wasiirkii beeraha Denmark ayaa Arbacadda todobaadkii hore isku-casilay amar sharci darro ah oo dowladda kasoo saartey dil-wadareed lagu sameeyay xayawaanka la dhaqdo ee Minks-ka.
"Waxaan maanta ku wargeliyey Ra'iisul Wasaaraha in aan rajeynayo in aan iska casilo xukuumadda. Waxaan sheegi karaa in aysan muhiim ahayn in aan taageero ka helo xisbiyada baarlamaanka," ayuu Mogens Jensen yiri.
Sikastaba, xisbiyadda mucaaradka oo aan ku qanciin is-casilaadda Jensen ayaa ra'iisul wasaare Mette Frederiksen ugu baaqay in ay caddeyso doorka ay ku lahayd amarkaas dowladeed ee carada iyo fadeexada dhaliyey.
"Ra'iisul Wasaaraha ayaa mas'uul ka ah amarkaas sharci daradda ah. Iyadda ayaa go’aanka gaartey mana faragelin si ay u joojiso markii ay ka war heshay sharci daradaas," ayuu yiri Jakob Elleman-Jensen, madaxa Liberal Party.
Wuxuu intaas ku daray: "Kiiskaan ma ahan mid ku istaagi kara bixitaanka Mogens Jensen. Wuxuu u baahan yahay in lagu sameeyo baaris guddiyadeed".
Horaantii bishaan November, Frederiksen ayaa soo saartey amar ay beeraleyda ku fareyso in ay laayaan xayawaanka mink-ka balse warar kala duwan waxay kasoo baxayaan sababta dhabta ah ee sidaas loo sameynayo.
Hasayeeshee, waxay ku guuldareysatay in ay meelmarinta qorshahaas codad uga hesho mudaneyaasha baarlamaanka oo si xoogan uga hor-yimid.
Qorshaha lagu laynayo xayawaanka ayaa ahaa in la dilo 17 milyan isla markaana la gubo ama la duugo sababo ku aadan faafinta Covid-19 oo ka bilowday safmareenka Coronavirus oo waddankaas uga soo rogaal celiyey.
Wasiir ka caroodey su'aallo laga waydiiyey kulan uu la yeeshay Khayre
Soomaliya 09.11.2019. 16:00
Mas'uulka ugu sareeya Waaxda Arrimaha Dibadda Denmark ayaa la hor-dhigay waydiimo adag oo socdaalkiisa Soomaaliya quseeya.
Denmark, Ireland iyo Poland oo safiiro cusub u soo dirsaday Soomaaliya
Soomaliya 03.11.2020. 17:00
Kenya iyo Denmark oo kala saxiixdey heshiis saameynaya Soomaaliya
Afrika 31.10.2020. 10:43
Jubaland iyo Denmark oo kawada hadlay doorashadda Soomaaliya
Soomaliya 28.11.2019. 21:57
Denmark oo "safaarad" ka furaneysa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho
Soomaliya 10.11.2019. 07:09